Ifektri yokubhala - Abakhiqizi baseChina nabaphakeli
Izinto zokubhala ziyithuluzi elidingwa yiwo wonke umuntu, ithuluzi eliyinhloko elisizayo labafundi lokufunda, futhi okubhaliwe iqoqo labantu abaningi. Izinto zokubhala ezilandelayo ziyatholakala: amapensela, izisuli, isici sokulola ipensela, ikesi lepensela, ikrayoni, izilawuli, incwadi yamanothi, iphedi yokubhala, ipeni, i-highlighter, omaka abamhlophe, omaka unomphela, izikhonkwane neziqeshana, njll. Izinto zethu zokubhala zenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ezingezona ezinobuthi nezingenaphunga. Singakwazi ukwenza ngokwezifiso imikhiqizo yakho, sinikeze imikhiqizo esezingeni eliphakeme nokupakisha okuhlukile ngentengo yokuncintisana. Kuhle kakhulu ngamaholide, amaphathi, abafundi, ukuvulwa kwesikole, izipho zokubuyela esikoleni, njll.
Ama-squishy Gel Pens & Notebook